. * . * . ကြယ်တစင်း . * . * .: Cameron Highlands (Malaysia) - 2
Cameron Highlands (Malaysia) - 2
Cameron Highlands (Malaysia) ပထမပို့စ်မှာ အထင်လွဲစရာတွေ တော်တော်ဖြစ်သွားတယ် .. ဒီလိုပဲ စကားပြောသလို ကမ်မရွန်းလို့ ရေးလိုက်လို့ ကိုယ်ပဲ တခြားနိုင်ငံ ကူးသွားသလိုလို :P တကယ်ကတော့ အရင်နေရာဟောင်းလေးမှာပါပဲ .. :D
Malaysia ရဲ့ Cameron Highlands ကို ဆက်သွားရအောင် ..
လဘက်ခင်းတွေပြီးတော့ Rainforest ကို ဆက်သွားကြပါတယ် .. အပေါ်ကို တက်သွားလိုက်တာနဲ့ ပိုပြီးတော့ အေးစိမ့်လာတယ် .. (ကံဆိုးစွာနဲ့ အနွေးထည် မပါသွားပါ) ဒါပေမယ့် ကြိုက်တယ် .. ဒီလိုပဲ လျှောက်သွား .. လမ်းတွေက မိုးရွာပြီးစလိုပဲ အမြဲတမ်း စိုစွတ်နေတယ် .. မကျယ်တဲ့ တံတားလမ်းလေးတွေအတိုင်း လျှောက်ရတယ် .. မြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်း တော်တော်များများက မှုန်မွှားနေတယ် .. ရေမှုန်ရေမွှားလေးတွေကပ်နေတယ် ..
အစဆုံးသွားတာတော့မဟုတ်ဘူး .. လိုက်ပို့တဲ့လူက ရပ်တော့ လှည့်တော့ဆိုတော့ ပြန်လှည့်ခဲ့ရတယ် .. အချိန်ကိုက် မိုးက ရွာသေး ..
ရောက်ပါပြီ .. ပန်းပျိုးခင်း အရောင်းဆိုင်လေးပါ .. ပန်းမျိုးစုံစုံ သစ်ပင်သေးသေးလေးတွေ စုံလင်ပါတယ် ..
ပန်းခင်း .. သိပ်တော့မလှဘူး .. မြင်းအီးစော်လိုလို နွားအီးစော်လိုလို နံသေးတယ်
ခရမ်းချဉ်ခင်းပါ .. ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်နော် .. အသီးလေးတွေကး)
စတော်ဗယ်ရီစိုက်ပျိုးခင်းပေါ့ .. ၀င်ပြီးအခင်းမှာကိုယ်တိုင် ဆွတ်လို့ရပေမယ့် မဆင်းခဲ့ဘူး .. (ပိုက်ပိုက်ကုန်မှာစိုးလို့) အပြင်မှာရောင်းတဲ့ စတော်ဗယ်ရီသီးကို ချောကလက်နှစ်ပြီးရောင်းတာ အရမ်းစားလို့ ကောင်းတယ် ..
ဆလပ်ရွက်စိုက်ခင်း .. ကြည့်လိုက်ရင် သိပ်လှတာပဲ .. သူငယ်ချင်းတွေကတော့ ကိုယ်တိုင်ဆွတ်ပြီး ၀ယ်ကြလေရဲ့ ..
ဟိုတယ် အတွင်းခန်း .. ကိုယ့် စလုံးက အခန်းထက် ၅ဆလောက်ကျယ်တယ် .. ရောက်တော့ မပြန်ချင်ဘူး .. :D အေးစိမ့်ပြီး နေလို့ကောင်းတယ် .. အဲ ညကျတော့ သရဲ နဲနဲကြောက်တယ် .. :D တိတ်ဆိတ်ပြီး အေးစိမ့်နေလို့
ဟိုတယ်ခန်းကနေ အပြင်ဘက်ကို မျှော်ပြီး ရိုက်ထားတာ ..
ပတ်ပတ်လည် တောင်တွေဝိုင်းလို့ .. တောင်ကြီးတို့ မေမြို့တို့ သံတွဲတို့ သွားသတိရတယ် ..
ဟိုတယ်က တော်တော်ကြီးတယ် .. ကိုယ့်အခန်းက တခြားဖက်ဟိုတယ်ကို လှမ်းရိုက်ထားတာ ..
ဟိုတယ်ခန်းကနေ အောက်က ပန်းခြံကို မြင်ရပုံ
၀ပါတယ် .. သွားတာ စုစုပေါင်း ၆ယောက် .. ကြာဇံတွေ ခေါက်ဆွဲတွေ ကြက်ဥတွေ မကုန်လို့ အိတ်ကြီးကြီး သယ်လာမိရကောင်းသား တွေးမိသေး ..
ညဈေးက လမ်းဘေးမှာ ရောင်းတဲ့ အစာတွေ .. ဗိုက်တင်းနေတော့ မစားခဲ့ပါဘူး .. ကုန်ကြမ်းရှာရုံ
ဒါက ကော်ဖီချိန် .. တယောက်ကို ကော်ဖီ၁ခွက် မုန့်တခု ..
သူငယ်ချင်းတွေ လက်မှတ်ဝယ်မယ် ဆိုပြီး သွားဖြစ်လိုက်တဲ့ ခရီးလေးပါ .. စုစုပေါင်း ၆ယောက် သွားကြတယ် .. ၁ညအိပ် ၂ရက်ခရီး .. စလုံးက ပရိုမိုးရှင်းချတဲ့ ဆိုက်တွေကနေ၀ယ်ပြီး သွားတာပါ .. ပက်ကေ့ရ်ှက အသွားအပြန်ကားခ ဟိုတယ်ခ မနက်စာ ၁ခါ ညစာ ၁ခါ ကော်ဖီချိန် ၁ခါ ပါပါတယ် .. အဲဒါကိုမှ စုစုပေါင်း ၉၀ကျော်ကျပြီး ကျန်တဲ့ အခင်းတွေသွားတာတော့ ကိုယ့်စရိတ်နဲ့ကိုယ်ပေါ့ .. (တန်တယ်နော် .. နဲနဲတော့ တန်တယ်လောက်လုပ်လိုက်ပါ) :D
ထပ်သွားချင်သေးတယ် .. ၁ခါရောက်ပြီးပေမယ့် အခွင့်ကြုံရင်ထပ်သွားဦးမယ် .. ရာသီဥတုကို အရမ်းကြိုက်လို့ပါ .. ပြီးတော့ အသီးအရွက်တွေ အရမ်းလတ်ဆတ်တယ် .. ပြောင်းဖူးမီးဖုတ် ၀ယ်စားတာ အရမ်းစားကောင်းတယ် .. တကယ့်စိတ်နဲ့ဆို အမြန်အမြန်နဲ့ လျှောက်မသွားချင်ဘူး .. ကိုယ့်စက်ဘီးလေးနဲ့ကိုယ် တနေရာသွားလိုက် နေချင်သလောက်နေလိုက် အဲလိုလုပ်ချင်တာ .. (စီးတတ်တာလိုက်လို့ :P)
နောင်များ အခွင့်အရေးလည်းရှိ ပိုက်ပိုက်လည်းရှိခဲ့ရင် ကျော်ပိုးအိတ်တလုံးလွယ် ခရီးတွေ လှည့်ထွက်ပစ်လိုက်ချင်တယ် ..
ကမ်မရွန်းဟိုက်လန်း ခရီးစဉ် ဤတွင်ပြီး၏ ...
ရေးသားသူ မိုးခါး at 2/16/2012 11:31:00 PM
အကြောင်းအရာခွဲ ခရီးသွားမှတ်တမ်း, ဒိုင်ယာရီ, အမှတ်တရ
Cameron Highlands (Malaysia) - 1
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ၉၇ နှစ်မြောက် မွေးနေ့ အမှတ်တရ